मानवता हराएको मान्छे- विविधा - कान्तिपुर समाचार
मानसिक सन्तुलन गुमाएको व्यक्तिले कुटाइ खाइरहँदा हाम्रा मुख किन बन्द ?
आश्विन १०, २०७५ झमक घिमिरे
काठमाडौँ — मेरो आँखामा नाचिरहेको छ एउटा दृश्य । टेलिभिजनको पर्दामा एउटा निर्दोष मानसिक असन्तुलित मानिसलाई बर्दीधारी प्रहरीले निर्मम कुटिरहेको छ । निर्ममसँग कुटिएको मानिस जोगिन यता र उता, घर–पसल भएतिर भाग्न खोजिरहेको थियो ।
तर उसलाई अनाहकमा कुटाइ खानबाट बचाउन त परै जाओस्, उल्टो उसलाई कठालोमा समातेर कुट्दै प्रहरी भएतिरै धकेलिदिँंदै थिए, त्यहाँका मान्छे ।
लोकतन्त्र, गणतन्त्रको दुहाइ दिनेहरूको मनभित्र अलिकति पनि मानवता छैन । हाम्रा मनमा अलिकति दयामायाको भाव छैन ? मानसिक सन्तुलन गुमाएको मानिसले आफ्नो आँखा अगाडि निर्ममसँग कुटाइ खाइरहँदा पनि हाम्रा मुखहरू किन बन्द छन् ? अनि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, घरबासको अधिकारलाई नैसर्गिक अर्थात् प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक अधिकारभित्र पार्ने अनि उपचार आवश्यक भएको नागरिकलाई निर्मतासँग कुट्ने प्रहरीलाई कारबाहीको कठघरामा उभ्याउने कि नउभ्याउने ?
मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने सरकारले बनाएको कानुन विपरीतका क्रियाकलाप हुँदा र पटक–पटक मानव अधिकारको हननका घटना घट्दा पनि आफ्ना संयन्त्रका दोषीलाई कारबाही नगर्नुले अपराध गर्नेहरूको मनोबल बढेको देखिन्छ । त्यसो त वर्षौंदेखि आफ्नो छोराको हत्यारालाई सजायको माग गर्दै अनशन बसिरहेकी गंगामाया अधिकारीले न्याय अझै पाएकी छैनन् । उल्टो उनले पति नन्दप्रसाद अधिकारीलाई अनशनकै क्रममा गुमाइन् ।
पटक–पटक शासन व्यवस्था फेरिए पनि न्याय पाउन नसकेका नागरिक हाम्रा वरिपरि धेरै छन् । हिजोको द्वन्द्वरत अवस्थामा जे–जे भयो, भयो भनेर वास्तविक दोषीहरूलाई न्यायिक छानबिन गर्नबाट बचाएर राख्न हुँदैन । हिजो सरकारमा रहेकाहरूले पनि गलत काम गरेका छन्, दोषको भागिदार हुनैपर्छ । दोषीहरूले सजाय भोग्नैपर्छ । अनि मात्र गंगामायाहरू जस्ता पात्रले न्यायको अनुभूति गर्न पाउनेछन् । सरकार कुनै पनि दोषीलाई सजाय दिन सफल भएको हेर्न चाहन्छन्, नेपाली जनता ।
प्रहरी प्रशासन भनेको जनतासँग सिधै जोडिएको निकाय हो । यो निकायका मान्छे सुरक्षाको सवालमा विशेष संवेदनशील भएनन् भने आम जनतामा आक्रोश, निराशा, छटपटी बढ्छ । यसले सरकारप्रति असन्तुष्टि जन्माउँछ । त्यसैले सरकार बेलैमा नागरिकको सुरक्षाको सवालमा गम्भीर बनोस् । जनताको शान्ति सुरक्षामा खटिएको निकायका मान्छे नै संवेदनहीन बनेपछि जनताले सुरक्षा संयन्त्रप्रति कसरी विश्वास गर्ने ?
केही समय अगाडि सुनसरीमा एक शिक्षकको हत्या भयो । भारतीय सुटर आएर उनीमाथि गोली वर्षाएर फरार भए । भारतीय अपराधीहरू सजिलै नेपाल पसेर नेपाली निर्दाेष नागरिकको हत्या गरेर भाग्न मिल्ने कस्तो फितलो हाम्रो नाका ?
भारतीय नागरिक जतिबेला मन लाग्यो, त्यतिबेला नेपाली भूमिमा पसेर यहाँ नृशंस ताण्डव मच्चाएर भाग्न भ्याउँदा नेपाल प्रहरी प्रशासन ट्वाल्ल परेर तमासा हेरिरहन्छ । नेपाल सरकारले यस्ता आपराधिक घटना हुन नदिन विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्छ ताकि आफ्ना नागरिक सुरक्षित हुन् । सरकार, प्रहरी प्रशासन, मानव अधिकारको सन्दर्भमा सचेत र संवेदनशील बन्न अत्यन्तै आवश्यक छ ।
प्रकाशित : आश्विन १०, २०७५ ०८:२७